2 afọ 6 ụbọchị gara aga #193 by PAYSON
M na-agụ na rapaara ka "agụ-m" n'ihi na Rikoooo si Connie. Amaghị m otú ị na-enwe ike ofufe ya, na o doro anya na, na-eme ya nke ọma. M gara CalClassics, ma ọ bụ ihe niile 2004, 2000, na 98 ụgbọ elu. M adịghị ofufe ọ bụla ma fsx stof, ma e wezụga n'ihi ọgụ, mgbe ahụ, m mara mma nke ukwuu a Ubisoft Ihọd. Daalụ maka Ama, ọ bụ ezie na. M n'ezie na-ekele gị enyemaka. (Ndị Electra bụ OK)